Converge II: Pan-African Blockchain & Crypto Meetup na-eme Nọvemba, 24th 2021
N'ịgbaso mpụ nke ọma nke mbipụta Converge mebere nke ọma, Pan-African Blockchain & Crypto Meetup nke Pan-African Blockchain na Crypto haziri Mgbidi.africa, a na-edozi usoro mgbasa ozi iji jide mbipụta nke abụọ (Converge II) nke mmemme ahụ. Debanye aha Ebe a ịga.
Dị ka onye nchoputa na onye nhazi nke Blockchain Nigeria User Group, Chuta Chimezie si kwuo, teknụzụ blockchain, bụ otu n'ime teknụzụ kacha akpaghasị nke mgbanwe ụlọ ọrụ nke anọ.
"Teknụzụ ọ bụla ọzọ na-egwu n'elu Protocol Ịntanetị, mana teknụzụ blockchain ga-enwerịrị usoro protocol ọzọ, nke bụ oyi akwa p2p.
Yabụ na ọ bụ mgbakwunye n'elu Protocol Internetntanetị na nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche, nke ukwuu, pụrụ iche n'ihe gbasara ịkpaghasị, na-agbanwe kpamkpam ụzọ anyị si azụ ahịa, otu anyị si emekọrịta ihe, yana otu anyị si ekekọrịta ozi na uru n'ofe. Ịntanetị ahụ."
Nzukọ Converge bụ mkparịta ụka dị mkpa na ụlọ ọrụ blockchain maka mmepe nke gburugburu ebe obibi dị mma na ya mere Blockbuild.africa kwenyere na nkà na ụzụ a na-apụta ga-enyere aka na mmepe nke kọntinent ahụ.
Converge II nwere isiokwu 'e-Naira, na Crypto, Mmetụta na akụnụba Naijiria' ga-eme site na Zoom na Wednesde, Nọvemba 24, 2021, na elekere 11 nke ụtụtụ (WAT).
Ihe omume a bụ blockchain na gburugburu ebe obibi Crypto nke anọ nke na-achọ ikpughe ihe ọhụrụ na-aga n'ihu na gburugburu ebe obibi na ndị mmekọ isi ihe dị ka Remita, Convexity, BNUG, Domineum & SIBAN na-akwado ya.
Ndị niile sonyere nwere mmasị nwere ike ịdebanye aha Ebe a.